एजेन्सी । युरोप महाद्वीपको उत्तरमा अवस्थित सुन्दर देश हो नर्वे । यो देश पृथ्वीको उत्तरी ध्रुवमा रहेकाले नर्वे चिसो तथा बरफका कैयौं पहाडहरुले भरिएको छ । विस्तृतमा
के तपाईको घरमा यस्ता चीज छन् ? छैनन् भने कहिल्यै हुनेछैन ईश्वरको कृपा
महिलाको मात्र रबाफ चल्ने ठाउँ
संसारभर केटीले केटा जिस्काएको कुरा सुन्न र देख्न पनि पाइन्छ । तर, विश्वमा यस्तो स्थान पनि रहेको छ जहाँ युवतीहरु युवाहरुलाई जिस्काउने काम गर्छन् ।
एक यस्ता चोर जसले राष्ट्रपति भवन नै बेचिदिए
क्रुर श्रीमान् !
काठमाडौँ । सुन्दरता बढाउनका लागि मानिस हरसम्भव प्रयास गर्छ । विशेषत महिलाहरु आफ्नो सुन्दरतालाई लिएर धेरै नै चिन्तित हुन्छन् ।